Flatbed Laser Cutting Machine - Laser Golden
Uchungechunge lwethu lwamva nje lomatshini wokusika i-laser flatbed laser yenzelwe ukuba ibe nefomathi enkulu, isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuzenzekelayo okuphezulu.
Inkqubo ekhokelela kumatshini, iinkqubo zendlela yokujonga, kunye neendlela zokulawula ziqinisekisa isantya esiphezulu kunye nozinzo oluphezulu loomatshini wokusika i-laser. Iijar & rack eziqhutywa kunye neervo motors zibonelela ngokuhamba ngokuchanekileyo ukuya kwi-8000mm / s2 ukukhawulezisa.
Iindidi zeendlela zokusebenzela ziyafumaneka, ezinokuhlangabezana ngokufanelekileyo nezidingo zokuqhubekeka kwamashishini ohlukeneyo kunye nemigaqo. Kwaye sinokwenza ngokwezifiso iifomathi zokusika ezifanelekileyo iimfuno ezithile zemveliso.
I-CO2 DC iglasi ye-laser ityhubhu okanye iRF yentsimbi ye-laser ityhubhu ngokuzikhethela ngokweshishini kunye neemfuno zokwenza. Oomatshini bethu bokucoca i-laser banokuxhotyiswa ngama-watts angama-80, ii watts ezili-130, ii-watts ezili-150, ii-watts ezingama-200, iiwatts ezingama-300, iiwatts ezingama-600, ii-watts ezingama-800 kunye ne-laser ephezulu ye-CO2.
Imodeli Hayi: JMCCJG-350400LD
CO2 I-Laser Cutter yeFilitha yengubo yokuThintela ukuThintela ukuThwala
Iigiya zokuchaneka okuphezulu kunye ne-rack eqhutywa. Ukusika isantya ukuya kwi-1200mm / s. CO2 RF laser 150W ukuya ku-800W. Inkqubo yokuhambisa ngenqanawa. Ukuzondla okuzenzekelayo ngokulungiswa kwengxinano. Ifanelekile ukusika ilaphu lokucoca, imitya yokucoca, i-polyester, PP, fiberglass, PTFE kunye nelaphu elenziwe ngemizi-mveliso.
Imodeli Hayi: JMCCJG-160300LD
Textile Laser Ukucanda Matshini ne Auto uMondli kunye swa enemingxuma Belt
Le yindlela enkulu yokusika ye-laser efomathiweyo iqhutywa ngegiya kunye nerakhi yokulawulwa kwemoto ye-servo. Izixhobo zibonelela ngokuzithandela kunye nesoftware yokwenza lula imveliso yakho kunye nokwandisa amathuba akho.
Imodeli Hayi: JMCZJJG (3D) -250300LD
Umatshini wokucheba i-Laser Duct Machine ye-Laser
Umdibaniso wefomathi enkulu X, Y axis laser ukusika (ukuncipha) kunye nesantya esiphezulu seGalvo laser perforating (imingxunya yokusika ye-laser). Yenzelwe ukusikwa kwe-duct yendwangu yokufakisha i-duct (i-sock duct, sox duct, duct sox, duct sock, duct yendwangu yendiza, umoya sock, umoya sox)
Imodeli Hayi: JMCCJG-250300LD
Umatshini wokusika weLaser kwiTekhnoloji yeTekhnoloji
Gear & nesakhelo eqhutywa umatshini laser isithole womelele ngokwaneleyo ukwenza amandla aphezulu CO2 laser ityhubhu. It uyaqaphela Isantya lunikezelo okuphezulu nesantya ukusika kunye yokukhanya eziphaphazelayo.
Imodeli Hayi: JYCCJG-160300LD
Speed ​​High ingubo Ilaphu Laser Cutting Machine
Lo msiki we-laser ulungele iimfuno zefashoni kunye nokwenza ngokwezifiso kwishishini lempahla yokunxiba kunye nelaphu. Ukucheba okuphezulu kwe-laser yeendwangu zodaka olulodwa, ukuqhubekeka ngokuthe ngqo ukusuka kuluhlu. Iphakheji yesoftware ibonelelwe ukufezekisa ukusebenza kwedijithali kunye nobukrelekrele.
Imodeli Hayi: JMCCJG-230230LD
Umatshini wokusika iLaser Laser kuMatshini weNylon, Fibglass, Nonwoven
Lo matshini we-laser cutter ulungele ngokufanelekileyo ukusika izinto ezahlukeneyo ezithambileyo kubandakanya amalaphu, iirhasi, iimpahla zokufakelwa ezishisayo, kunye neendwangu zobugcisa kuluhlu olubanzi lwezicelo ukusuka kumzi mveliso wokucoca ukuya kumashishini wezithuthi nawomkhosi.
Imodeli Hayi: JMCCJG-250350LD
Airbag Laser Ukucanda Matshini ne Multi-umaleko Auto uMondli
Izisombululo zeGoldenlaser ezinikezelwe ukusika i-airbag laser qinisekisa umgangatho, ukhuseleko kunye nokugcinwa, ukuphendula kwanda kunye nokuhluka kweebhegi zomoya ezifuneka kwimigangatho emitsha yokukhuselwa.
Imodeli Hayi: CJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Ubungakanani boMatshini wokuSika i-Ultra ubungakanani beLaser
Umatshini wokusika i-laser unetafile esebenza ixesha elide. Ubude beetafile zokusika ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-6, iimitha ezisi-9 okanye iimitha ezili-11 kunye neemitha ezili-13.
Imodeli Hayi: JMCCJG-260400LD
Laser Cutting Matshini for Car mat
format Large nocoselelo ephakamileyo ngesantya esiphezulu ukusika ubukhulu kunye neemilo of iikhaphethi ezahlukeneyo yemoto ukhuko.